सबैभन्दा ठूलो, तेश्रो ठूलो, चौथो ठूलो, सातौँ र आठौँ ठूलो पार्टी सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु हुन् । ती सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर कल्पना गर्दा एउटा विशाल कम्युनिष्ट बन्छ : घनश्याम भुसाल — Jana Garjan
३. कित्ता बिनाको अर्को कित्तका हामी अनौठो अवस्थामा छौँ । हामी क्रान्तिकै पक्षमा दृढ छौँ । तर, आजको क्रान्तिको बाटो के हो ? कसरी अगाडि बढ्छ ? कसले गर्छ ? त्यसका चुनौति के हुन् ? त्यसका लागि अवसरहरु के के हुन्जस्ता अनेकौँ प्रश्नमा हामीलाई द्विविधा हुन्छ । किनकि ती विषयमा आजकल कुनै छलफल नै हुँदैन, कसैले पढाउँदैन । हामी चुनाव देखेर हुक्र्यौँ, चुनाव जित्दा क्रान्ति नजिक छ जस्तो लाग्छ । तर चुनावदेखि चुनावसम्म नै हो त क्रान्ति भन्ने पनि लाग्छ । तर हामीलाई जनवादी केन्द्रियताबारे सबैभन्दा बढि थाहा छ : बहुमतको निर्णय सबैले मान्नु पर्छ, माथिको निर्णय सबैले मान्नु पर्छ । फेरि, यस्तो अकाट्य ठानिएको सूत्रले पनि क्रान्तिको समस्या समाधान नगरेको, मुलुक र पार्टीमा कचिङ्गल भैरहेको, गुटहरु लडिरहेको, ठूला गुटले सबै थोक गरिरहेको देख्दा हाम्रो मन खिन्न हुन्छ । पार्टीलाई अप्ठेरो परेको बेला सडकमा निस्कने, पार्टीको निर्णय हो भनेपछि जे पनि गर्न तयार हुने हाम्रो कित्ता सबैभन्दा ठूलो छ ।